३० बर्ष पुरानो ग्यास्टिक पनि तुरुन्तै निको पार्ने घरेलु ओेैषधी…… ( भिडियो हेर्नुहोस् ) – Eshankharapur
गौरादह अनौठो घट`ना ! श्रीमान घर आउँदा श्रीमतीको श`व खाट मुनी फेला, लैलाले गर्दैछ अनु सन्धान (भिडियो हेर्नुस्)
ह्वात्तै ब`ढ्यो सुनको मू`ल्य, हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
फेरी १८ दिन लकडाउन हुने ! यस्तो छ तयारी
८० प्रतिशत नेपालीला ग्या`स्ट्रिक : यसबाट ब`च्न के गर्ने ? (हरेक नेपालीले जा`न्नै पर्ने)
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/३० बर्ष पुरानो ग्यास्टिक पनि तुरुन्तै निको पार्ने घरेलु ओेैषधी…… ( भिडियो हेर्नुहोस् )
ग्यास्टिक सम्बन्धि गायिका तथा सञ्चारकर्मी प्रजिता दंगालले ब्युटिफुल युट्युव च्यानलमा तयार पारेको यो भिडियो हेर्नुहोस् ।
मासुमा भन्दा तेब्बर प्रोटिन पाइन्छ यी खानेकुरामा !
पाँचऔंलेमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण (प्रयोग गर्ने तरिका)